Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatey qarax ka dhacay meel ku dhoow xarunta nabadsugidda oo uu saakay booqan lahaa Madaxweyne Xasan
Muqdisho, Wacaal Media
Warar dheeri ah oo kasoo baxaya Qarax xoogan oo kol dhawayd ka dhacay Baar Fiat ee degmada Cabdicasiis ee Gobolka Banaadir ayaa sheegaya in loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha Qaraxa laguna soo xiray bam-gacmeed.
Goobta qaraxu ka dhacay waxaa ku dhaw xarunta hay’adda nabad-sugidda ee dowlad Soomaaliya, Warar hor dhac ah oo soo baxaay ayaa sheegaya in ugu yaraan 9 qof ay ku dhinteen halka 6 qof oo kalena ku dhaawacmeen qaraxa oo ka dhacay baar la sheegey in ay inta badan fariisan jireen shaqaalaha hay’adda nabadugidda qaranka ee Dowladda Soomaaliya.
Agagaarka Baar Fiat waxaa isbaaro u taala ciidanka nabadsugidda, kuwaas oo ilaaliya Xarunta ciidanka Sirdoonka ee Dolwadda Soomaaliya, waxayna baaritaan adag ku sameeyaan gawaarida waddooyinkaas Soo gala amba isticmaala.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in saakay xarunta nabadsugidda oo ah halka la rabay in la qarxiyo uu booqan lahaa Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dabadeedna qaraxaan lal beegsaday taasi oo rumaynaysa in dowladda aysan jirin wax amni ah oo gacanta ugu jira.
Dhanka kale, dadka ka faalooda amaanka magaalada caasimadda ah ayaa aaminsan in Hay’adda sirdoonka dowladda ay noqotay tan ugu jilicsan weerarada iyo qaraxyada ay qaadaan Alshabaab.
6 + seven = Wararka